အစ္စရေးနိုင်ငံ နဲ့ ဂျေရုဆလင်ဗိမ္မာန်တော် 2018
May5at 10:34pm ·
အစ္စရေးနိုင်ငံ နဲ့ ဂျေရုဆလင်ဗိမ္မာန်တော်
ဒါဝိတ်မင်းရဲ့ သားတော် ဆော်လမုန်မင်းကြီး
ဘေဗီလုန်အင်ပါယာ အောက်မှာ နေဖို့ ပရောဖက်ကြီး ယေရမိက ပြောခဲ့ပေမဲ့ မရပါ။ စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီး ဗိမာန်တော် ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ ဘေဗီလုန်စစ်တပ် ခါလဒဲတွေ အင်မတန် ရက်စက်စွာ ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ပညာရှိများစွာ ဒံယေလ နေဟမိ မျိုးဆက်များ တို့အပါအဝင် သိမ်းပိုက်ခေါ်ဆောင် သွားပါတယ်။(နေဟမိကျမ်းစာ နှင့် မြည်တမ်း)။
၃၇ဘီစီ မှ ၃ အေဒီ
ရောမအင်ပါယာ လက်အောက်ခံ ယုဒဘုရင် မဟာဟေရုဒ်မင်း လက်ထက်မှာ ဒုတိယဗိမ္မာန်တော် တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရောမတွေကို တော်လှန်ဖို့ ဇေလုတ် ဆိုတဲ့ ဂျူးအမျိူုးသား ဝါဒီ များက ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အေဒီ ၇၀ မှာ ရောမအင်ပါယာ စစ်တပ်ကြီးက ဖျက်ဆီးပြီး ဂျူးလူမျိုးအားလုံး သတ်ဖြတ်ခံရ. ဂျေရုဆလင်မြို့ကနေလဲ မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
သခင်ယေရှု လူ့ဇာတိခံယူ ဖွားမြင်ပြီး လောကသားတွေကို ကယ်တင်ဖို့ ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးတွေက လက်မခံပဲ. လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် တင်ပြီးသတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့ အပြစ်အတွက် အသွေးသွန်းလောင်း.. အသေခံပြီး . . ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်အင်ပါယာ အောက်မှာ ဂျုးလူမျိုးများ ကမ္ဘာအနှံ့က ပြန်လာခွင့် ပေးပါတယ်။ ပြန်လာကြပြီး အင်္ဂလိပ်တို့က ၁၉၄၉ မှာ အစ္စရေး နိုင်ငံ ထူထောင်ခွင့်ပေးပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် အာရပ်နိုင်ငံများနဲ့ စစ်ကြီး ၄ကြိမ် ၁၉၄၉ ၁၉၅၆ ၁၉၆၇ ၁၉၇၃ ဖြစ်ပွားပြီး. .၁၉၆၇စစ်ပွဲမှာ ယေရုဆလင်မြို့ အပြီးသိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အစ္စရေး က အနုမြူ ဗုံးလက်နက်များစွာ ပိုင်ဆိုင်နေပြီ သေချာပေါက် ယူဆနေကြလို့ အာရပ်တွေလည်း အနုမြူ ဗုံးပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
တတိယဗိမ္မာန်တော် တည်ဆောက်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ မူလနေရာမှာ မွတ်ဆလင်ဗလီကြီး အခိုင်အမာရှိနေတဲ့အတွက် . .ခက်ခဲနေပါတယ်။ ဘာသာကြီး၃ခု ခရစ်ယာန် မွတ်ဆလင် ဂျူး ဘာသာများရဲ့ အထွဋ်ထိပ် ယေရုဆလင်မြို့တော်ကို အစ္စရေးနိုင်ငံ မြို့တော်အဖြစ် ၁၉၆၇ ကတည်းက သတ်မှတ် ကြေညာပေမဲ့ ဘယ်နိုင်ငံမှ လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ ၂၀၁၇ မှာတော့ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့် က လက်ခံပြီး အမေရိကန်သံရုံးကို ပြောင်း ရွှေ့နေပါပြီ။ နောက်ဆုံးသောကာလ (မသဲ၂၄ နဲ့ ဗျာဒိတ်ကျမ်း) မကြာခင် ( နှစ်၅၀အတွင်း ) ရောက်မယ်လို့ ပြောဆိုနေသူ များစွာ ရှိနေပါပြီ။ အခြေအနေ များကလဲ ကျမ်းစာရေးထားသလို ပရောဖက်ပြုချက်များ ပြည့်စုံလာပါပြီ. . ။
ပုံ. .အစ္စရေးနိုင်ငံ ယခု ၂၀၁၈ မြေပုံ နှင့် ခရစ်တော်လက်ထက် အေဒီ၃-၄၀
ငါသည်အလဖ ဖြစ်၏။ သြမေဃလည်း ဖြစ်၏။ အဦးဆုံးသောသူ. နောက်ဆုံးသောသူ ဖြစ်၏။ အသက်ပင်နှင့် ဆိုင်၍ မြို့ဝင်ပေါက် တံခါအတွင်းသို့ ဝင်အံ့သောငှာ ပညတ်တော် တို့ကို ကျင့်သော သူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ . . . ငါသည် အလျင်အမြန် ပြန်လာမည် မှန်ပေ၏ ဟု ဤအရာများကို သက်သေခံသောသူ မိန့်တော်မူ၏။ အာ မင်။ သခင်ယေရှု ကြွလာတော် မူပါ။ ကျေးဇူးတော် သည် သန့် ရှင်းသူ အပေါင်းတို့၌ ရှိစေသတည်း။
ဗျာဒိတ် ၂၂ (အဆုံး ကျမ်းပိုဒ်)။